ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ – Popinvdo
အဖွားကတော့ မြှောက်ပေးလိုက်ပြန်ပြီလို့ပဲ ပြောရမလားပဲ? တကယ့်ကိုပါပဲ. . . ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းက အသက် ၁၀၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ဖွားဖွား Mildred Bowers ကတော့ ပြတ်သားစွာ ကြွေးကြော်ပြောကြားလိုက်တာက “သူမရဲ့ အသက်ရှည်ကျန်းမာနုပျိုခြင်း ရဲ့ အဓိက သော့ချက်က ဘီယာသောက်သုံးခြင်းကြောင့်ပါ”တဲ့။သူမဟာ နေ့စဉ်မပြတ် ဘီယာသောက်သုံးလာတာ ယနေ့တိုင်ပါပဲတဲ့။ သူမဟာ ဘီယာကို ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ …
January 16, 2019 - by မေ သတင်း လေး - LeaveaComment
သင့်အဆုတ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ၂။ သင့်ဓမ္မတာလာတဲ့အခါ တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ပဲစိမ်း စားပေးပါ။ (green beans to stop the period) ရပ်ချင်ရင်စားတာပါ။ ၃။ သင့်ဆီးလမ်းကြောင်းကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ကြက်သွန်နီကို အစိမ်းစားသုံးပေးပါ။ ၄။ သင့်ကျောက်ကပ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် နေ့ခင်းဘက်မှာ ရေများများသောက်ပြီး၊ ညဘက်မှာ ရေလျှော့သောက်ပါ။ ၅။ …
January 11, 2019 - by မေ သတင်း လေး - LeaveaComment
လည်ချောင်းကင်ဆာ(Throatcancer)နဲ့ပတ်သက်ပျောက်ကင်းသက်သာစေမည့်သဘာဝဆေးဝါးအကြောင်းဖော်ပြပေးပါလို့ ရေးသားလာပါတယ်။ ကင်ဆာအတွက်ဖော်ညွှန်းထားတဲ့ဆေးဝါးတွေကတော့အများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့သဘာဆေးဝါးတွေအများကြီးထဲကမှအကောင်းဆုံးနဲ့လွယ်ကူပြီး ထိ့ရောက်မှု့ရှိတဲ့ ဆေးဝါးကို ရွေးချယ်ရပါတယ်။ဥပမာ…မြန်မာပြည်မှာ ရှာဖွေရလွယ်ကူတဲ့ ဆေးပင်ဆေးဥ ဆေးရွက်မျိုးလည်းဖြစ်ရပါမယ်။အခုလည်ချောင်းကင်ဆာ(throatcancer)ကိုပျောက်ကင်းသက်သာစေမည့်သဘာဝဆေးအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဘူးသီးဖျော်ရည်(Bottle gourd juice) လတ်ဆတ်နုနယ်သောဘူးသီးတစ်လုံးကိုရေဖြင့်သန့်စင်အောင်ဆေးကြော၍အခွံအစေ့အနှစ်အားလုံးကိုသစ်သီးဖျော်စက်ဖြင့် ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ခန့်ရအောင်ပြုလုပ်ပါ။ဘူးသီဖျော်ရည်ထဲကိုပင်စိမ်းရွက်အရည်(Basiljuice)ကိုဇွန်းဖြင့်တစ်ဇွန်းခန့်ထပ်မံပေါင်းထည့်ပါ။နောက်တစ်မျိုးကပူစီနံဖျော်ရည်(Peppermintjuice)ကိုလည်းဇွန်းဖြင့်တစ်ဇွန်းခန့်ထပ်မံပေါင်းထည့်ပါ။ ဤအရည်(၃)မျိုးကိုရောစပ်ပြီးပါကသေချာမွှေနှောက်၍တစ်နေ့ကိုမနက်ည(၂)ကြိမ်(၃၄)လအထိ့ပုံမှန်သောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့် လည်ချောင်းကင်ဆာကို အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ဘဝခါးခါး
အမြွှာကိုယ်ဝန်လိုချင်သူတွေ လိုက်နာ၊သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
January 7, 2019 - by မေ သတင်း လေး - LeaveaComment
အမြွှာသားသား၊ မီးမီးလေးတွေကိုမှ ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အမြွှာကိုယ်ဝန်ရနိုင်မယ့် သဘာဝနည်းလမ်းတစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ အမြွှာကိုယ်ဝန်မှာမှ သွင်တူနဲ့ သွင်မတူဆိုပြီး (၂)မျိုးနှစ်စား ရှိပါတယ်။ သွင်တူ (သို့) (monozygotic twins) ဆိုတာကတော့ မမျိုးဥ တစ်လုံးနဲ့ Sperm တစ်ကောင်က မျိုးအောင်ပြီးနောက် သန္ဓေသားလောင်း(၂)ခု ခွဲဝေဖြစ်ပေါ်တာပါ။ genetic components ချင်းလည်းတူ၊ သွင်တူ genetic structures …
လူမှုကွန်ယက်မှာ အလွန်ရေပန်းစားနေတဲ့ မပင်မပန်းဘဲ ရေကိုအသုံးပြု ဝိတ်ချနည်း
လက်ရှိအမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို လိုတာထက်ပိုပြီး မဝစေချင်ကြပါဘူး။ တစ်ချို့သော အမျိုးသမီးဆိုရင် မကိတ်ချင်နေပါစေ၊ ဝိတ်အလွန်းအမင်း တက်မနေရင်ကို အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီး ပြောနေတက်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အစားအစာနဲ့၊ ကိုယ်လက်စထရောပမာဏ ယခင်နဲ့ယခု များစွာပြောင်းလဲသွားပြီဆိုပါက ဝိတ်တက်ဖို့ မြန်စေပါတယ်။ ဒါကို အထူးသတိထားရပါမယ်။ အခုတော့ အမျိုသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ရေကိုအသုံးပြုဝိတ်ချနည်းကို အမျိုးသမီးတော်တော်များများက အလွန်ယုံကြည်နေကြည်နေကြပြီး၊ မူရင်းပို့စ်ကိုပြန်လည်မျှဝေသူပေါင်း သောင်းနဲ့ချီရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ …
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါလုံးဝ ပြန်မဖြစ်စေနိုင်သော ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်းကောင်း တစ်လက်​====================== ကျွန်တော် နှလုံးရောဂါ ပြင်းထန်စွာခံစားရချိန် ကျွန်တော် နေထိုင်ရာ ပုသိမ်မြို့ရှိ ပုသိမ် ဆေးရုံကြီး နှင့်​ ဇီဝကအထူးကု ဆေးခန်းတို့ တွင်တက်ရောက်ကုသခဲ့ရာ ​ဆေးစစ်ချက်အရ နှလုံးသွေးကြော သုံးချောင်းကျဉ်းနေပြီးတစ်ချောင်းမှာ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်တော့သော ကြောင့် နှလုံးစက် ထည့်ရမည့်အခြေနေဖြစ်ခဲ့ပါသည်- ထိုအချိန်တွင်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှ ကျွန်တော့် လို ခွဲစိပ်ခါနီးလူနာတစ်ဦး မခွဲစိပ်ရပဲသက်သာပျောက်ကင်းသွား …
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း၊ ဒီဗွန်ခရိုင်ရှိ သုတေသနတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော အိတ်ဇီတာ တက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံပညာရှင်တို့၏ တွေ့ရှိချက်အရ ချစ်တင်းများများနှောခြင်းသည် အမျိုးသားတို့၏ လိင်အင်္ဂါဖွံ့ဖြိုးလာစေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ယခုတွေ့ရှိချက်ကို Evolution journal တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီး မကြာခဏချစ်တင်းနှီးနှောခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားတို့၏ မျိုးပွားအင်္ဂါဖွံ့ဖြိုးလာစေနိုင်ကြောင်း တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလေ့လာချက်ကို နွားချေးပိုးများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ မိတ်လိုက်မှု အကြိမ်ရေများပြားသည့် …